Forum serasera malagasy Genesisy, Evanjely sy ny resaka evôlisiona vs famoronana, fizaràna fahatelo - Dinika forum.serasera.org
Genesisy, Evanjely sy ny resaka evôlisiona vs famoronana, fizaràna fahatelo
Fitohizan'ny hafatra : Genesisy, Evanjely sy ny resaka evôlisiona vs famoronana, fizaràna fahatelo
Nehemiah - 18/04/2013 06:03
Ny kristiana dia mpanaraka an'i Kristy rahateo. Ny bouddhistes dia mpanaraka an'i Bouddha, ny marxistes dia mpanaraka an'i Marx, fa ny antsika kristiana indray dia i Jesoa no Tompo, ary ny zavatra lazainy no arahintsika. Ary mahavariana ery fa rehefa miteny an'izay eo imason'ny besinimaro ny olona dia heverina ho tsy "politiquement correct" satria mandratra ny sasany. Kanefa izay no marina : matoky an'i Kristy isika satria Izy no hany Famonjentsika.
Inona kosa no nolazain'ny Famonjentsika momba ny fitantaran'ny Gen. 1-11 ?
Mk. 10:6 : "fa hatramin’ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lahy sy vavy no nanaovany ny olona [Gen. 1.27]."
Andraso kely ry Jeso a ! T@ fiafaran'ny evôlisiona no nipoitra ny olombelona, fa tsy t@ fony vao ary ny Tany ! Raha ataontsika hoe herintaona izao tontolo izao dia t@ 31/12 t@ 8 alina no nipoitra ny olombelona ! Tsy mahay antrôpôlôjia mihitsy ianao izany ry Jeso !
Sa ny antrôpôlôjia ve no tsy manana ny marina ?
Lk. 17:27 : "nihinana izy, nisotro izy, nampaka-bady izy, navoaka hampakarina izy, mandra-pihavin’ ny andro izay nidiran’ i Noa tao amin’ ny sambo-fiara, dia tonga ny Safo-drano ka nandringana azy rehetra."
Ka ny haibolantany evôlisionista anie efa milaza fa tsy nisy izao ny Safo-drano ry Jeso e ! Tsy mba mpahaibolantany an ianao !
Sa ny haibolantany ve no namadika ambony ambany ny tena fahamarinana ?
Ka @ maha-mpanara-dia an'i Kristy antsika, tsy tokony inoantsika ve ny zavatra ninoany ? Raha tsy izay dia mba misy dikany velively ve ny "mino an'i Kristy ?"
Rehefa zohina tsara anie dia mifototra @ Genesisy ny ankabeazan'ny fampianaran'i Jesoa.
Andeha isika handinika kely ny momba ny fanambadiana (sady lamaody any @ France "renintsika malala" @'izao fotoana izao ny adi-hevitra momba ny "mariage pour tous" ). Nahoana ny fanambadiana no tsy maintsy lehilahy iray sy vehivavy iray mandrapahafaty ? Maninona izao ny lehilahy 1 no tsy afaka manambady vehivavy 10 000 (raha zakan'ny tsenany), lehilahy hafa, biby, zavamaniry, na manambady ny tenany (dia @'izay manana ny tombontsoa ananan'ny mpivady izy) ? Inona no mamepetra ny famaritana ny fanambadiana ?
Mt. 19:5, Mk. 10:7 : "Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin’ ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany izy roroa". Hentitra sy mazava.
Mazava loatra fa t@ Gen. 2:24 no nangalan'i Jesoa an'izay. Ka raha tsy marina ny Genesisy dia tsy misy famaritana marim-pototra ny fanambadiana, ary raha mahatsikaritra isika dia arakaraky ny anilihan'ny fiaraha-monina ny fitantaran'ny Genesisy no mampirongatra ny fanelahana .
Ity koa misy zavatra hafa izay efa mihamanjavona ankehitriny : ny akanjo. Mifandraika @ evôlisiona ve ny miakanjo ? Jereo tsara fa raha ny an'ny evôlisiona, tokony tsy miakanjo isika mba hiaro ny vatantsika @ hatsiaka fa tokony miboridana ka rehefa tratran'ny hatsiaka sy ny orana ary ny zavatra hafa dia miainga @'izay ny fizotra evôlisionista ka lasa mivoatra isika dia misy volo matevina tsara mitsiry eran'ny vatantsika manontolo, alaivo sary an-tsaina anie izay .
Hitantsika @'izany fa mifanohitra @ evôlisiona ny miakanjo, ary raha mahatsikaritra ianareo dia manana fironana hanjavona manomboka avy @ foatra mankany ambony sy ambany ny akanjo . Avy taiza kay io fomba io ?
Gen. 3:21 : Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an’ i Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy.
Manambara ny fahafatesana (@ heviny ara-Baiboly) voalohany ity andininy ity, satria tsy maintsy namono biby Andriamanitra mba hanamboarana akanjo ho azy 2, mba hisaromana ny henatr'izy ireo. Teôlôjia marim-pototra mihitsy izany.
Avy taiza no nipoiran'ny hevitra hoe ny fahafatesana no tambin'ny ota ? Inona aloha no atao hoe ota ? Ny ota dia heloka bevava eo anatrehan'Andriamanitra.
Gen. 2:17 : "fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa hianao". Avy @ Genesisy koa izay : rehefa tsy mankato an'ilay Andriamanitra Masina indrindra antsika dia tsy maintsy maty.
Hafa mihitsy ho an'ny Amerikana anie ny mandaka alika sy ny mandaka an'i Obama e. Mampigadra ny faha-2. Fa Andriamanitra kosa dia masina lavitra noho Obama.
Soa ihany fa nanapa-kevitra Andriamanitra fa hanome ny olombelona "fika" ialàna @'izany Izy, izany hoe ny famonjena, ary ny famonjena dia avy @ Jesoa.
Jereo tsara fa ny rafitra ota-fahafatesana-famonjena avy @ Jesoa no vontoatin'ny finoana kristiana. Raha tsy nisy ny Adama sy Eva tena izy izay nanao ota tena izy tany @ Sahan'i Edena tena izy, inona fotsiny angaha no ilantsika an'i Jesoa hanafaka antsika @ toetra maha-mpanota tsy tena izy ? Raha tsy nisy ny Adama voalohan-dahy dia inona no ilàna ny Adama farany (1 Kor. 15:45) ? Mazava loatra izany.
Kanefa betsaka ny kristiana manao hoe : "Angano natao ho metafôra fotsiny anie ny Gen. 1-11 !" Raha tena angano tokoa ilay izy dia ianjadian'ny olana isika : malaza ery ho tsara vakiana alohan'ny hatoriana ny lisi-taranaka @ Genesisy miaraka @ "Rehefa izao taona i anona dia niteraka an'i anona..." be dia be ireny, ary asehon'izy ireny fa misy taranaka mifampitohy tsy tapaka manomboka @ Adama ka hatr@ Jesoa (izahao Lk. 3).
Ka raha angano i Adama dia angano i Jesoa, ary ataoko fa samy mahafantatra an'ity fiteny ity : "Angano angano, arira arira" ! Hevitra mavesa-danja indrindra izay.
Ary ny mpandà an'Andriamanitra anie no tena mahazo an'izay an-tsaina tsara. Izao no nolazain'i G. Richard Bozarth t@ lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "The Meaning of Evolution", t@ magazina "American Atheist" (20/9/1979, p. 30) :
"Tsy maintsy mifantoka tanteraka @ fahariana manokana izay soritan'ny Ganesisy ny fivavahana kristiana tena izy, ary tsy maintsy manohitra arak'izay tratry ny ainy ny fotopisainan'ny evôlisiona izy. Efa mazava ankehitriny fa raha tsy nisy i Adama sy Eva, sady tsy naneho tsi-fankatoavana an'Andriamanitra t@ nihinanan'izy ireo ny voankazo voarara, lasa tsy misy dikany ny nahatongavan'i Jesoa tety ambonin'ny tany sy ny fahafatesany. Satria raha tsy misy ny otan'i Adama dia iza no mba mila Mpamonjy ? Raha tsy misy i Adama sy ny fahalavoana izay nitarika fahafatesana, misy ilàna azy ihany ve ny finoana kristiana ? Tsy misy !".
Ny Genesisy no fototra ary raha marefo ny fototra dia manjary manatanteraka ny fiteny frantsay : "un colosse aux pieds d'argile" (Dan 2).
Nehemiah - 18/04/2013 06:07
Ity ny rohy mankany @ fizaràna faha-2 ho an'izay liana :
Miharena - 18/04/2013 13:39
Ny kristiana dia mpanaraka an'i Kristy rahateo. Ny bouddhistes dia mpanaraka an'i Bouddha, ny marxistes dia mpanaraka an'i Marx, fa ny antsika kristiana indray dia i Jesoa no Tompo, ary ny zavatra lazainy no arahintsika.
Ilay teny hoe "mpanaraka" ve toy ny manaraka filoham-pirenena na mpanjaka?
Nehemiah - 18/04/2013 13:51
Tahaky ny fanarahana an'Andriamanitra.
Miharena - 18/04/2013 14:02
Fanontaniana manaraka ho an'ny namana Nehemiah,
raha manajanaka ianao, ary tsy mbola misy miresaka momba ny hoe tsy izy ny evolisionisma any am-pianarana, inona no fampianarana azonao omena azy?
Ary raha menao azy ohatra ity lahateny avoitranao eto ity, mandresy lahatra azy ve?
Nehemiah - 18/04/2013 14:14
Mbola tsy tanteraka ny lahateny fa mbola ho be ny fizaràna ho avy. Fa izany hoe zavatra efa nataoko t@ ankizy 6e sy 5e izany ary tena voarainy tsara mihitsy izany rehefa azavaina @ fomba tsotsotra, satria mora taomina izy ireo ary mbola tsy niraikitra t@ sainy ny fandrebirebena saim-bahoaka evôlisionista izay efa manomboka mipoitra @ sekoly gasy, hany ka rehefa aseho azy ireo fa tsy lôjika izany hoe taranaka mikrôba ny olombelona dia hitany tsara mihitsy ny maha-tsi-lôjika azy.
Miharena - 18/04/2013 14:42
Ary raha atao hoe fiarahamientan'ny sela maro no mandraifitra ny olombelona sy ny biby ary ny zavamaniry ary mitovy karazana ny materialy mandrafitra azy ireo avy. Dia lavinao ve ary ilazanao ny mpianatra hoe aza mino izany ianareo fa tsy voasoratra ao anaty Baiboly izany?
Nehemiah - 18/04/2013 14:52
Ary raha atao hoe fiarahamientan'ny sela maro no mandraifitra ny olombelona sy ny biby ary ny zavamaniry ary mitovy karazana ny materialy mandrafitra azy ireo avy.
Manana porofo an'izay ve aloha ianao ?
Miharena - 18/04/2013 16:30
Rafitra iray ihany no itombenan'ny rindran'ny karazana isanisany dia ny ADN. Ny fiovaovana ao amin'ny rafitra na programan'ny ADN no miteraka karazana zavamananaina hitantsika maso eto ambonin'ny an-tany. Ahoana moa no hanazavana ny fiainan'ny akoho iray ohatra, izay vao avy manatody dia mikotrika ary mitaiza ny zanany?
Tsy mila porofoina izany fa zavatra hita sy azo fakafakaina lalina ny firafiny ary fantatra ny programa nipoirany avy.
Ka asa hoe fehezanteny andalan-teny vitsivitsy (milaza hoe misia izatsy sy izaroa) ve afaka manazava ny zava-drehetra mandrafitra ny tontolon'aina?
Raha mamaky Korana ianao dia mahita ny filazana ny tsirinaina fa tsy toy ny Baiboly izay maneho hevitra sy rafi-piheverana avokoa ny ankamaroany. Ka tsy azo atao mihitsy ny mampitaha ny fandalinana siansa sy ny fiheverana na rafi-piheverana.
Miharena - 18/04/2013 17:33
toa avy hatrany dia mivoy ny fifanoheran'ny siansa sy ny finoana ianao namana Nehemiah, nefa izaho dia mahita fa raha tsy misy finoana tsy misy siansa mahitsy fijery, ary raha tsy mahitsy fijery dia tsy misy fanaporofoana azo ampongatra eo amin'ny finoana sy siansa. Tsy mifanohitra ireo fa ny iray manambara ny fiandohana sy ny tranga niteraka izao rafi-pisainana sy finoana ankehitriny izao (=Baiboly, Korana, sns...), ny iray manaporofo ny fiandohana sy ny tontolony (=Siansa).
andrywui - 22/04/2013 20:53
fa misy zavatra kely anotaniako anareo mpahay anle resaka ity oe ,, ozy ny baiboly oe izay manampy na manala ny teny ao amin'ity bokin'ny faminaniana ity ozy dia Andriamanitra ny hanala ny anjara hazon'ainany sy hamafa ny anarany amin'ny bokin'ny fianana mintsy aza angamba izy zay , nefa misy anle boky oe konkordansa (concordance) ireny tena miampy be d be mihitsy deaona zany
andrywui - 22/04/2013 20:57
Miharena - 23/04/2013 14:25
Salama ra Andrywui, raha ny fahafantarako azy dia ao ami'ny bokin'ny Apokalypsy io resaka tsy mahazo manampy na manala io. Bokin'y faminaniana izy io ary tsy azo ampiana na analàna fa ireo rehetra ireo dia ho tanteraka avokoa.
Ny momba ny concordance indray, dia raha tsy misy concordance dia tsy azo porofoina hoe marina ny Baiboly. Inona àry moa no fahataterahan'ny teny ao naanty Baiboly amin'y fiainana andavanadron'ny olombelona ary ny fiainana mandrakizay izay ambara ao raha tsy misy concordance?
Nehemiah - 26/04/2013 13:11
Entaniko hiverina hamaky ny fizaràna teo aloha ianao.
Tsy mampifanohitra ny siansa sy ny finoana izao mihitsy aho, raha miteny an'izay dia tsy misy raha azonao ny hafatro, na nohajamban'ny andriamanitr'izao tontolo izao. Ary ny faha-2 angamba no marina.
Esory ao anatin'ny ati-dohanareo ny hoe "minoa fotsiny ihany"="minoa anjambany".
Aza hamavoina ny tenin'Andriamanitra.
Nehemiah - 26/04/2013 13:18
Fanontaniana tsara sady tso-po.
Ny konkôrdansa dia karazana rakibolan'ny teny hebreo sy grika hita @ Baiboly. Misy baiboly Louis Segond izay misy numéro aorian'ny teny ts11. Iny no jerenao @ konkôrdansa dia hitanao ny hevitr'ilay teny @ fiteny ôrizinaly.
Fitaovana tsara mihitsy io raha tianao akàna toky ny filazàna fantaisiste ataon'ny sekta momba ny lahatsoratry ny Baiboly dôrizinina
Angamba ny olona manamboatra rakibolana Larousse dia tsy manampy inona na inona mihitsy @ hevitry ny "Comédie humaine", na ny "Rougon-Macquart". Torak'izay koa tsy dia azo lazaina fa manampy inona na inona ny konkôrdansa fa mitondra fanampim-panazavàna @ filazan'ny Baiboly fotsiny.
Izany akory tsy midika fa diso ny teneninao momba ny hoe tsy azo analàna tsy azo anampiana ny Baiboly. Marina mihitsy io. Ny dikan'izay dia tsy misy lahatsoratra hafa ankoatr'izay ao anatin'ny Baiboly azo lazaina ho tenin'Andriamanitra ka omena fahefàna.
Nehemiah - 26/04/2013 15:20
Ity indray ary ny rohy mankany @ fizaràna manaraka :
Miharena - 27/04/2013 16:32
Aza hamavoina ny tenin'Andriamanitra
Ilay hoe minoafotsiny ihany dia tsy midika hoe minoa anjambany. Sao dia diso fanoratra ianao satria lasa manamavo ilay teny hoe minoa fotsiny ihany rehefa manao io dila "mety mivilana" io.
Ny dikan'ny hoe minoa fotsiny ihany dia hoe matokia, na aza misalasala.
Nehemiah - 29/04/2013 05:40
Nefa tsy midika izany hoe : "Ario @ zôridira ny ati-dohanao alohan'ny hidirana @ fiangonana".
Miharena - 29/04/2013 06:54
Sasanangy samhafa ny fanahy finoana sy ny saina Ny finoana dia fahatokiana sy fahefana fa ny saina indray mandrindra izay vokatry ny finoana. Izany hoe izay manam-pinoana ihany no mahefa ary avoaka ara-tsaina izany ho lasa fitondran-tena sy foto-pisainana. Saingy mety ho diso lalana ilay finoana dia mahefa zavatra hafa ivelan'ny tokony ho izy ny olona. Ohatra, raha mino izy fa ny halatra no mampanankarena, dia ataony io ary mahazo izay ilainy tokoa izy fa tsy mijery hoe inona no vokany.
Na izany na tsy izany dia hita taratra eny hatrany raha lalimpaka izay foto-pinoany izay na tsia ary hta koa hoe ilay marivo sa ilay lalina mihitsy no mibaiko azy.
Azo refesina tsara izy io na eo amin'ny krisitianina aza. Hoy I Jesoa izay hoe ; na dia kely hoatry ny voantsinampy aza ny finoanareo dia mahafindra tendrombohitra izany. Fa hita taratra hoe marivo finoana ny olona rehefa mitoky amin'ny zavatra sy ny ara-nofo fa tsy amin'ny fanahy sy finoana, izay tsy hita maso nefa tsapa ny fahefany.
Nehemiah - 29/04/2013 07:02